Nagu saabsan - Gopod Group Holding Limited
Nagu saabsan Macluumaadka Shirkadda Taariikhda Shirkadda Abaalmarino Sharafeed Shahaadada shatiga Shahaadada Shahaadada Qalabka Warshadda
Waxaa la aasaasay 2006, Gopod Group Holding Limited waa shirkad farsamo sare leh oo qaran ahaan la aqoonsan yahay oo ku takhasustay R&D, wax soo saarka iyo iibinta qalabka kombiyuutarka iyo qalabka taleefanka gacanta. Waxaan ku leenahay Shenzhen iyo Foshan laba warshadood oo daboolaya aag dhan 35,000 mitir murabac, oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 1,500 oo shaqaale ah. Intaa waxaa dheer, waxaan dhiseynaa baarkin warshadeed oo tiknoolajiyad sare leh 350,000-mitir oo laba jibbaaran oo ku yaal Shunde, Foshan.
Gopod waxay leedahay silsilad dhammaystiran iyo soo -saaris iyo koox sare oo R&D ah oo ka badan 100 xubnood, waxaan bixinnaa adeegyo is -habeyn wax -soo -saar oo dhammaystiran oo u dhexeeya naqshadeynta warshadaha, naqshadaynta farsamada, naqshadda wareegga isku -dhafan, naqshadeynta softiweerka ilaa horumarinta caaryada iyo ururinta alaabta. Shirkaddu waxay leedahay unugyo ganacsi oo ay ka mid yihiin R&D, wax -ka -beddelidda, wax -soo -saarka fiilada, aqoon -is -weydaarsiga korantada korantada, aqoon -is -weydaarsiga birta ee CNC, SMT iyo isu imaatinka. Oo waxaan helnay IS09001: 2008, ISO14000, BSCI, SA8000 iyo shahaadooyin kale, iyo sidoo kale arsenal weyn oo shatiyada.
Sannadkii 2009, warshadda Gopod Shenzhen waxay heshay shahaadada MFi waxayna noqotay soo saaraha qandaraaska ee Apple.
Sanadka 2019, alaabada Gopod waxay gashay shabakadda iibka caalamiga ah ee Apple Store waxayna si wanaagsan ugu iibisaa Ameerika, Yurub, Australia, Japan, Korea, iwm. Iibsashada ugu Fiican, Fry's, Suuqa Warbaahinta iyo Saturn.
Waxaan leenahay koox adeeg farsamo oo xirfad leh, wax soo saar sare iyo qalab tijaabo, karti wax soo saar oo sarreeya iyo nidaam xakamaynta tayada oo aad u fiican, kaas oo naga dhigaya lamaanahaaga ugu fiican.
2021 Hore ayaan u soconnaa.
2020In kasta oo ay jiraan dabaylaha madaxa ee ay sababtay masiibada COVID-19 ee 2020, waxaan ku guuleysanay koror joogto ah iibinta sanadka, taas oo ay ugu wacan tahay dadaalka wadajirka ah ee dhammaan shaqaalaheena.
2019Waxaan bilownay mashruucii ugu horreeyay ee 100W GaN xeedho gaan, oo ay dad badani maalgelinayaan ilaa $ 2.45 milyan. Waxaan sidoo kale keennay alaabadayada laxiriira USB-C Dukaanka Apple sidaa darteedna waxaan aragnay booditaan weyn oo iib ah. Ilaa hadda, waxaan ku haynaa 12 mashruuc dukaanka Apple.
2018Waxaan rarnay in ka badan 5 milyan oo badeecooyin ah USB-C HUB, oo ah kuwa ugu sarreeya warshadaha. Qaybtayada ganacsi ee korontada ayaa la aasaasay ka dibna waxay heshay shatiyo caalami ah oo markii dambe la bilaabay PowerHUB iyo PowerBank HUB, taasoo tirada guud ee shatiyadeena ka dhigaysa in ka badan 150. Intaa waxaa dheer, qaybta ganacsigu waxay soo saartay warshadii-130W PD PowerBank-kii ugu horreeyay.
2017Waxaan aragnay koboc ganacsi oo xooggan, iyadoo iibku ka badan yahay US $ 100 milyan markii ugu horreysay. Waxaan gaarsiinay shixnadihii ugu badnaa ee USB-C HUB ee warshadaha.
2016Gopod waxaa loo dallacsiiyay inuu xubin ka noqdo HDMI/USB-IF/QI/VESA. Lacag-bixintii dadkii badnaa ka hor-iibinta fidiyaha USB-C waxay gaartay US $ 3.14 milyan, oo ah tan ugu badan warshadaha.
2015Gopod wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Naqshadeynta Alaabada ugu Wanaagsan ee CES iyo taxaneheeda USB-C waxay heleen Abaalmarinta Naqshadda IF. Waxa kale oo ay MFi ku hagaajisay V6.4. Warshadihiisu waxay heleen shahaadooyin sida ISO9000/ 14000 iyo BSCI.
2014Gopod wuxuu soo saaray alaabtii ugu horreysay ee kaydinta shahaadada MFi-ga ee adduunka, iyada oo ay dad badani maalgelinayaan ilaa $ 2 milyan. Waxay ahayd kaydinta ugu iibinta badan nooceeda adduunka.
2013Gopod wuxuu aasaasay unug wax soo saarka qalabka saxda ah. Waxaa lagu qalabeeyay qalab aad u tiro badan oo xirfadlayaal ah, cutubku wuxuu ku takhasusay wax soo saarka qalabka sida daawaha aluminiumka.
2012Gopod wuxuu aasaasay unug ganacsi oo fiilada ah, kaas oo ku takhasusay soo saarista fiilooyin kala duwan oo ay ku jiraan fiilooyinka USB-ga ee MFi-ga haysta.
2011Gopod wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Naqshadeynta CES ee Mareykanka Waxay sidoo kale biloowday batterigii ugu horreeyay ee la-laaban karo ee MFi.
2009Gopod wuxuu helay shahaadada MFi ee Apple wuxuuna bilaabay inuu horumariyo oo soo saaro qalabka taleefanka gacanta ee MFi-ga haysta
2008Gopod ayaa dib -u -eegay istaraatiijiyaddii ay xoogga saareysay soo -saaridda qalabka taleefanka gacanta.
2006Gopod waxaa la aasaasay, kuna takhasusay R&D, wax soo saarka iyo iibinta aaladaha kombiyuutarka.